QADHAADH CUNTO AH EE JIKADA: SIDA AY U EKAANEYSO SAWIRKA, SIDA LOOGA TAKHALUSO BADARKA, BURKA, NOOCYADA MIRO, KAHORTAGGA IYO XEERARKA KAYDINTA DALAGYADA - GURI, GURI
Cayayaanka jikada jikada: muuqaalka, sawir, meesha uu ku nool yahay, waxa ay cunaan, xakamaynta iyo tallaabooyinka ka hortagga
Hudheel kasta wuxuu isku dayayaa inuu nadiifiyo jikada.
Mararka qaarkood meedhexaadku waxaa laga yaabaa inay soo muuqdaan marti lama filaan ah - aboor ku cun.
Dhacdooyinkeeda waxaa calaamad u ah alaabta la tuuray, caleenta daaqadda furan, iyo burka.
Mawduuca maqaalkan maanta waa aboor cunno: sawir, sida looga takhaluso cayayaanku? Aboor aan xoomin, siriyaal iyo noocyo kale.
Muuqaal, nolol iyo horumar
Waxaa jira noocyo dhowr ah oo aan aboor ku jirin ugu caansan waa caarada kookahakuwaas oo jecel inay ku wareegaan "meelahooda" kaliya habeenkii. Waxay u egtahay balastar yar oo aan ka badnayn 1 cm. Midabkiisu waa mid aan muuqan, laga bilaabo buni ilaa cawl leh dhibco yaryar.
Cayayaanka waxay ku nool yihiin dhowr toddobaadlaakiin maalmahan waxay soo saartaa farac weyn. Dheef-soo-saarku wuxuu dhacaa oo keliya marka ay jirto biyo bilaash ah. Aboorka kijada ma cuno cuntosababtoo ah ma laha nidaam dheef-shiid leh. Cunto cunnahooda dirxiga.
Horumarintu waxay maraysaa saddex marxaladood, waa - saarista ukumaha, koritaanka xoogga leh, soo ifbaxa iftiinka.
Waa maxay aboorka cuntada u eg, sawirka hoose:
Waxyeelo si nin
Dhibaatada ugu weyn ee ay sameeyeen aboorka jikada waa cunto xumo. Haddii ay "booqatay" badeecadda, mar dambe ma cuni karo. Sidoo kale raashinka wasakheysan laguma talinayo iibka.
Waxyaabaha cudurka cayayaanka qaba waxay mararka qaarkood galaan suuqa labaad. Kaddib marka aad iibsato sida qofku halis ugu keeno cunto karis ah oo gurigiisa ku yaal.
Cayayaanka jikada wuxuu waxyeelo u geystaa dhammaan marxaladaha horumarinta. Ukuntu waxay qaadsiin kartaa cuntadaka dib oo aan mar dambe la baabbi'in karin. Dirxiga ayaa ka soo baxaya alaabada qashinka., si khaas ah u cunaan. Dumarka qaangaarka ah, inkastoo ay u baahanyihiin cunto, waxay u soo saaraan carruurtooda inay ku siiyaan cuntooyinka dalagga.
Waxyaabaha kale, waxay si fiican ugu boodaan miisaska iyo faafinta cudurka. Haddii barar uu soo muuqdo, ka dibna suxuunta loo isticmaalo cuntada waa in la dhaqaa ka hor intaan la cunin. Tani waxay khusaysaa kaliya ma ahan taarikada iyo fargeetooyinka, laakiin sidoo kale dhammaan caleenta inta badan la isticmaalo.
Dadka qaangaarka ah ee noloshooda gaaban ayaa ka baxaya farcankiisa, tiradaasi waxay noqon kartaa ilaa 400 gogo '. Maaskale kasta ayaa si isdabajoog ah u beddela maqaarka. Sababtan awgeed, boqollaal saxaro iyo astaamo kale ayaa lagu arkay maqaallaha ka dib marka ay dirxiga ka soo baxaan.
Haddii aad isticmaashid cunnooyinkaas, waxaa suurtagal ah in suntan jirka, xasaasiyadaha, sumowga cuntada.
Maxay jilitaanku jecel yihiin?
Dirxiga cayayaanka cun cunnooyinka oo dhan. Ha ka xumaanin baastada, digirta. Waxaa laga heli karaa bacaha la ilaaliyo, qayb ahaan ee badarka.
Waxay soo baxday in farcanka si fudud u galaan si adag si ay u gaaraan meelo.
Sidoo kale bar wuxuu ku noolaan karaa gudaha nafaqadaInta badan waxaa laga helaa "qolof" oo ah walax. Qosol, laakiin laamo aan dareen lahayn waxay cunaan xawaash iyo dhar.
Waxaa soo baxday in aboorka jikada ku qarinayaan meelo aan la filaynin, sidaas darteed calaamad ugu yar ee joogitaanka jikada, waxaa haboon in la hubiyo in wax kasta oo la socda.
Baargaabinta badarka waxay jecel yihiin hadhuudh iyo burka. Baalallaha dhogorta ah waxay cunaan nacnacyada, miraha la qalajiyey. Waxay soo baxdaa liis guud, oo ay ku jiraan noocyada noocan oo kale ah sida:
dhammaan noocyada nuts;
miro la qalajiyey;
Sidee iyo meesha lagu keydiyo badarka?
Wixii keyd ah ee alaabada waaweyn laguma talinayo in la isticmaalo bacaha balaastiga ah. Caanaha ku kaydi dhalada nadiifka ah ama dhoobada. Ka hor inta aan la xirin markabka buuxsan, waxaad u baahan tahay inaad aragto xaaladda kooxda, sababtoo ah waxaad ku dhejin kartaa caleen bacda hoose ee weelka.
Booska ayaa ku filan laba qaybood. Waxaa fiican inaad bedesho daboolka maro dharka leh ama faashad labajibbaaran.. Waxaad ku hagaajin kartaa calanka xajmiga. Waxyaallad kasta waxay ubaahantahay hawo.
Sidee loo xafidaa firileyda si aan u bilaabin baraha? Bariisku waa in lagu kaydiyaa weel dhoobada ah oo cusbo ku jira bac. Waxay ka saari doontaa dhammaan qoyaanka iyo urka. Intaas waxaa sii dheer, badeecada buluuga ah ayaa sii hayn doona hantidooda muddo dheer.
Iska daadi ka hor inta aanad jebin. Ku hay bacda jilicsan. Si aad u ilaaliso burka dheer oo si taxadar leh loo kaydiyaa, waxaa lagu talinayaa in lagu maydho boorsada lagu keydiyo xal salineed.
Muraayada iyo dhoobada waxaa lagu beddeli karaa dhalo caag ah.
Haddii iftiinku uu ku dhaco cad adag, waxay ku jiraan oksitized. Meesha ugu fiican ee lagu kaydiyo iyaga qalalan, shelf mug leh hawo qabow.
Bankiga leh siriyaalka waa inuu ku taallaa shelf, oo ma ahan meesha ugu sareysa, sida qof kastaa u maleeyo. Qeybta sare ee qoyaanka iyo uumiga oo looga hortago dhadhanka culus ee ka soo haray xaalad wanaagsan wakhti dheer. Xuubku wuxuu ka hortagaa dhacdooyinka cayayaanka, sidaas awgeed hadhuudhka qaboojiyaha ayaa la keydin karaa, laakiin tani waxay u baahan tahay inaad hagaajiso heerkulka roogagga hoose.
Marka la eego jaangooyooyinka, dalagyada waa in lagu keydiyaa heerkul ah ilaa 6 digrii. 10 iyo wixii ka sareeya, cayayaanka ayaa dareemi doona dareenkooda. Daqiiqada, badarka iyo baastada ayaa hayn doona hantidooda, haddii ay ku kaydsan yihiin dabinka. Qaarkood waxay leeyihiin guryo leh qolal gaar ah oo loogu talagalay kaydka cuntada.
TALO! Baro wax ku saabsan ku dhalaallaa baalalka labadaba kiimiko dhaqameedka iyo daaweynta dadka.
Fiiri fiidiyowga sidaad si habboon u kaydiso dalagyada, si ay u barafka iyo caaryadu aanay u bilaabi doonin:
Miyuu cuntada dharka cunaa ma cunaa dharka?
Marka aboorka maqaarku ka soo baxo jikada, waa inaadan walwal gelin in ay cunsuriyadeeysay dharka dhogorta leh iyo dhididka xayiraadda.
Aboorka cuntada dhar ma cunaan, cuntadiisu waxay ka koobantahay kaliya firileyda, burka iyo alaabta rootiga. Miraha iyo macmacaanka sidoo kale ma quusto.
Looma baahna in laga walwalo waxyaabaha, inkastoo ay lagama maarmaan tahay in jeegareynta lagu sameeyo shooladaha si aysan dharka ufudud u ekaan sida balastar.
Aboorka cuntadu ma qaban karo xajmiga cuntada sababtoo ah maqaar la'aanta ku jirta caloosha iyo mindhicirka. Waxay u isticmaashaa wax kasta oo qofku cuno, oo keliya kartoon, polietilen, maro iyo warqad ayaa lagu daraa cuntadan. Dhab ahaan, "waxyaabahan" kuwani waa, si ay u helaan wax aad u wanaagsan.
Iibsaday qoyaan siiriyaalka foornada. Heerkulka u deji 60 darajo oo ka saar sheyada bulkeed ee kariyaha ilaa 15 daqiiqo.
Isticmaal weelasha dhalooyinka ama bacaha ee kaydinta cuntada. iyadoo dabool adag ah. Waxay kuu ogolaanayaan inaad si xakameysan u xakameyso jiritaanka cayayaan cuntada.
Ku dalbo nadiifinta nadiifinta joogtada ah, nadiifinta qoyaanka gudaha santuuqyada, isticmaalka saliidaha lagama maarmaanka ah - dhammaantood waxay ka cabsiinayaan aboorka cuntada.
Marar badan samee baaritaan alaabooyin waaweyn, xawaashka, dhirta la qalajiyey iyo miro la qalajiyey. Talaabooyinkan waxay u oggolaanayaan in si ku meel gaar ah loo ogaado cayayaan xaasidnimo.
Xaalad kasta ha ahaato sida nadiifka ah ee jikada, martigelintu waa inay noqotaa mid taxadar badan si ay u noqoto cunto dabacsan, sababtoo ah xilliga ugu habboon ee aan ku habboonayn, waxaa laga dhigi karaa baro cuf ah oo aan habbooneyn isticmaalka.
DIB U EEGIDDA! Waxaa jira aboor ku xeeldheer shimbiraha. Tincture ku salaysan dirxiga ay leedahay guryaha badan oo daaweyn ah.